साहित्यमा नेपाली माटो र भाषाको सुगन्ध आउनुपर्छ - निर्दोष जीवन
ताजा खबर प्रदेश नं. ३ साहित्य
साहित्यमा नेपाली माटो र भाषाको सुगन्ध आउनुपर्छ – निर्दोष जीवन
२ वर्ष अगाडि २ वर्ष अगाडि Abinash Thapa	0 Comments भाषाको सुगन्ध आउनुपर्छ
भाषाको सुगन्ध आउनुपर्छ – लेखक तथा गायक निर्दोष जीवन दुईदशक देखि साहित्यमा कलम चलाइरहनु भएको छ ।उहाँले कथा,गजल,गीत,मुक्तक,उपन्यास र हाइकू लेख्नुहुन्छ । उहाँले गीतबाट साहित्यमा प्रवेश गर्नु भएको हो ।साहित्यमा लाग्नुको प्रेरणाको स्रोत गजलकार लेखराम सापकोटालाई मान्नु हुन्छ आशीर्वाद (गजल,मुक्तक,हाइकू) सङ्ग्रह २०६१, नयाँ जीवन (उपन्यास) – २०६२ ,प्रार्थना (एल्वम) – २०६३, कोर्राको चोट (एल्वम) – २०७३, फस्ट लभ (गजल एल्वम) , मैयाँ कथा सङ्ग्रह – २०७५, मेरो गीत (एल्वम)-२०७६, र प्रियसाथी (गजल सङ्ग्रह ) – २०७६ प्रकाशित भैसकेको छ।
प्रथम – रत्ननगर महोत्सव(गजल प्रतियोगिता ), प्रथम – सरस्वती युवा क्लबले गरेको (गजल प्रतियोगिता) – प्रथम, बुटवल साहित्य कला संस्कृति प्रतिष्ठान (गजल प्रतियोगिता )-२०६२, प्रथम , सिनर्जी एफ.एम.(गजल प्रतियोगिता )-२०६२ बाट सम्मान तथा पुरस्कार प्राप्त भैसकेको छ ।सिर्जना प्रतिष्ठान नवलपुर ,गैंडाकोट र गजल मञ्च चितवनमा आवद्ध हुनुहुन्छ ।
मेरो आठौं कृति गजल सङ्ग्रह “प्रिय साथी ” र मेरो चौंथो साङ्गितिक एल्वम “मेरो गीत “लाई मेरा प्रिय पाठक तथा स्रोताहरुको माझ पुराएपछि त्यसैको प्रतिक्रया लिनमा व्यस्त छु ।
तपाईंको विचारमा साहित्य के हो ? साहित्य सिर्जना के को निम्ति गर्नुहुन्छ?
साहित्य मनको दर्पण हो ।मनका भावहरुलाई एेनामा सजिलोसँग उतार्न साहित्यले ठूलो भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ।
झन्डै दुई दशक पहिले र अहिलेको नेपाली साहित्यमा के भिन्नता देख्नु भएको छ?अहिलेको नेपाली साहित्यको स्थिती बारे कत्तिको सकारात्मक हुनुहुन्छ?
धेरै नै भिन्नता छ । पहिला साहित्य पढ्ने पाठकहरु नै कम थिए। पुस्तकहरु कमै मात्रामा प्रकाशित हुन्थे । तर अहिले पुस्तक किनेर पढ्ने पाठकहरुको संख्या बढेर गएको छ । पुस्तकहरुको प्रकाशन पनि बढेको छ।विभिन्न पत्र पत्रिका तथा मिडियाले साहित्यलाई माथि उठाउन ठूलो भुमिका निभाएको छ ,जसले गर्दा साहित्य हरेक घर घरमा पुग्न सकेको छ । अहिले साहित्य प्रति पाठकहरुले देखाएको रुचिलाई आधार बनाउने हो भने अहिलेको साहित्यले राम्रो छलाङ मार्न सफल भएको देखिन्छ ।यसलाई सकारात्मक मान्नु पर्छ।
सुचना प्रविधिको विकास भएकैले गर्दा नेपाली साहित्य विश्व सामु पुग्न सकेको छ। प्रविधिको माध्यमद्वारा हरेक लेखकले आफूलाई हरेक पाठकको सामु पुर्याउन सकेको छ। साहित्य र सुचना प्रविधि एक अर्को बिच परिपूरक बनेको छ ।
पुरुष लेखकको तुलनामा महिला लेखक ब्यवहारिक कुराहरुको कारणले मात्रै पछि परेका हुन् लेखनीका हिसाबले त महिला लेखकहरुले समेत पुरुष लेखकहरुलाई पछि पारेका छन् । घर परिवार प्रतिको आफ्नो जिम्मेवारीको कारण जति पुरुष लेखक अगाडि छन् त्यति महिला लेखक आउन सकेका छैनन् ।तर महिला लेखकहरुले नेपाली साहित्यलाई अनमोल कृतिहरु दिएर नेपाली साहित्यलाई माथि उठ्न ठूलो भुमिका निभाएका छन्।
नातावाद र कृपावादले साहित्यमा मात्रै होइन हरेक क्षेत्रमा प्रभाव पार्ने गर्दछ। जसको कारणले गर्दा सम्भावना भएका लेखक पछाडि पर्नु परेको छ अनि यसले साहित्यको गुणस्तरलाई खस्काइदिएको छ।यस्तो प्रवृत्ति हुनु भनेको साहित्यको लागि गम्भीर समस्या हो।
साहित्य निश्चितरूपमा समाजको ऐना हो। समाजका विभिन्न कथावस्तुहरु (सामाजिक विभेद ,कमलरी प्रथा, सामाजिक विकृति बारे,गर्भपतन सम्बन्धि आदी) लाई टपक्क टिपेर लेख्न सकेमा साहित्य समाजको ऐना बन्नेछ।
साहित्यलाई राज्यले जब सम्म आफ्नो ठान्दैन तब सम्म नेपाली साहित्य विश्व माझ पुग्न सक्दैन । राज्यले साहित्यको संरक्षण गर्नुपर्नेछ ।राज्यकोषबाट साहित्यका लागि बजेट छुट्याउनु पर्छ। राज्यले लेखकहरुलाई लेखेरै बाँच्न सक्ने वातावरण बनाइदिनु पर्छ।लेखकहरुलाई सम्मानित नजरले हेर्नुपर्छ ।
साहित्य सके सम्म आफ्नै नेपाली मौलिकतामा लेखिनु पर्छ । साहित्य सबैले बुझ्न सक्ने हुनुपर्छ । साहित्यमा सरलता आउनुपर्छ।शब्दकोष पल्टाएर साहित्य पढ्नु पर्ने स्थिति आउनु हुन्न। आफ्नै मौलिकपन हुनुपर्छ । नेपाली माटो र भाषाको सुगन्ध आउनु पर्छ ।
र यो पनि हेर्नुस – साहित्यले महिला पुरुष भन्दैन – लेखक रामलाल जोशी
आ- आफ्नै गुटबन्दीको कारणले यस्तो समस्या आएको हो। सबैलाई आफ्नै धरहरा ठड्याउनु परेको हुँदा समस्याले चरम रुप लिएको हो।मैले मात्रै जानेको छु,बुझेको छु ,मेरो सृजना मात्रै राम्रो ,मेरो संस्थाले गरेको काम महान छ भन्ने अहम्ताले गर्दा नै यस्तो समस्या देखा परेको हो। शुद्ध मनले साहित्य लेखिनु पर्छ । हरेक लेखकले आफ्नो रुचि रहेको साहित्यक विधाको गहिरो अध्ययन गरेर लेखिने हो भने यस्ता विवादहरु आफै हटेर जानेछ।साहित्य रहरले लेखिनु हुन्न ।
गजल सङ्ग्रह “प्रिय साथी” भित्र केके भेटिन्छ ? केका लागि पढ्नुपर्छ? -“
प्रिय साथी “गजल सङ्ग्रह भित्र पाठकले चाहेका सबै विषय वस्तुमा केन्द्रित भएर लेखिएका गजलहरु पाउनुहुनेछ। यसमा माया प्रेम,सामाजिक विभेद ,राजनीति,राष्ट्रियता ,चेतनामूलक आदी विषय वस्तुमा केन्द्रित रहेर लेखिएका गजलहरु समावेश गरिएको छ।
अन्त्यमा मैले सोध्न छुटाएको केही कुराहरु छन् भने राख्न सक्नु हुनेछ।
खासै त केही छैन ।सबैले नेपाली साहित्यलाई माया गरौँ । पुस्तक मागेर होइन किनेर पढौं ।मेरा कुराहरु राख्ने मौका दिनुभएकोमा यहाँलाई पनि धन्यवाद ।
← पशुपतिले बनाए सम्झनालाई कान्छी बुहारी
प्रदेश २ अन्तर्गतको पूर्व पश्चिम राजमार्ग सडकखण्डमा टाइमकार्ड →
थाइल्यान्डमा जारी आइसीसी महिला टी-२० छनोटमा नेपाल सहज जित
हेटौंडा लेडि जेसिजद्धारा ॐ वृद्धाआश्रममा खाद्यान्न सामाग्री वितरण